Sheekh Shariif oo markale ku celiyay in doorashada ay waqtigeeda ku dhacdo | HalQaran.com
Home Warar Cusub Sheekh Shariif oo markale ku celiyay in doorashada ay waqtigeeda ku dhacdo
Sheekh Shariif oo markale ku celiyay in doorashada ay waqtigeeda ku dhacdo
Garoowe (Halqaran.com) – Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa markale ku celiyay inay muhiim tahay in doorashada waqtigeeda ku dhacdao, islamarkaana noqoto mid leysla ogol yahay.
Wuxuu hadalkaan ka sheegay Sheekh Shariif xilli uu hadal ka jeedinayay xeritaanka Shirka Madasha Aragti Wadaaga ee Magaalada Garoowe, isagoona xusay, in muhiim ay tahay in la qabto doorasho wada ogol ah oo waqtigeeda ku dhacda.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Sheekh Shariif ayaa sheegay in dhameystirka Dastuurka qabyada ah uu horseedi karo qabashada doorasho qof iyo Cod ah, isaga oo sidoo kale ka digay in la musuq maasuqo dhaqaalaha dalka.
Inta badan Madaxda ka qeyb-gashay Shirka Madasha Aragti Wadaaga ee Machadka Heritage ayaa waxaa ay ku celceliyeen inay muhiim tahay in laga wada heshiiyo doorashada uu muranka ka taagan yahay si ay u dhacdo mid la isku raacsan yahay.
waqtigeeda ku dhacdo